बुटवल पावर कम्पनीले १४ सय मेगावाटका आयोजना अघि बढाउँदै - UrjaKhabar Urja Khabar - Nepal's No. 1 energy based online portal.
असार ०५, २०७५ 5682 ऊर्जा खबर/काठमाडौं
निजी क्षेत्रले नेतृत्व गरेको बुटवल पावर कम्पनी (बिपिसी) ले करिब १४ सय मेगावाटका जलविद्युत आयोजनाको निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको छ । निजी क्षेत्रको स्वामित्वमा यति धेरै क्षमताका आयोजना अघि बढाएको यो सम्भवतः पहिलो कम्पनी हो ।
बिपिसीले ५ आयोजना चिनियाँ कम्पनीसँगको सहकार्य र २ आफ्नै स्वामित्वमा अघि बढाइरहेको छ । ५ वर्षमा १ हजार मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय प्रणालीमा जोड्ने लक्ष्यसहित कम्पनी आयोजना निर्माणमा केन्द्रित छ । ७ आयोजनाको क्षमता १३ सय ८६ मेगावाट छ ।
बिपिसीले अघि बढाएका दुई आयोजना (३७.६ मेगावाटको काबेली–ए र ३० मेगावाटको न्यादी) अहिले निर्माणाधीन छन् । बाँकी ५ आयोजना चिनियाँ कम्पनीसँगको साझेदारीमा अध्ययन प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।
चीनका ३ कम्पनीसँग लगानी साझेदारीमा ६ सय मेगावाटको माथिल्लो मर्स्याङ्दी–२, २ सय ८२ मेगावाटको मनाङ मर्स्याङ्दी, १ सय ३८ मेगावाटको माथिल्लो मर्स्याङ्दी–१ आयोजनाको अध्ययन थालिएको छ । यस्तै, १ सय ४० मेगावाटको तल्लो मनाङ मर्स्याङ्दी र १ सय ५९ मेगावाटको मुगु कर्णाली पनि अध्ययनको क्रममा छन् ।
मुगु कर्णाली बाहेक मर्स्याङ्दी कोरिडोरमा मात्र ११ सय ६० मेगावाटका आयोजना निर्माण हुनेछन् । यी सबै आयोजना अहिले अध्ययनको विभिन्न चरणमा रहेको कम्पनीले जनाएको छ । ६ सय मेगावाटको माथिल्लो मर्स्याङ्दी–२ केही समयअघि बिपिसीले भारतीय कम्पनी जिएमआरसँग किनेको हो ।
५ वटै आयोजनामा चीनका ३ ठूला कम्पनीको लगानी रहनेछ । बिपिसी र चीनको सिचुवान प्रोभिन्सियल इन्भेष्टमेन्ट ग्रुप, चेङ्गदु सिंचेन इन्भेष्टमेन्ट ग्रुप र छिमयुआन इन्जिनियरिङ कन्सल्टिङबीच आयोजनामा लगानी गर्ने समझदारी भइसकेको छ ।
आयोजना विकास गर्न बिपिसी र ३ चिनियाँ कम्पनीको स्वामित्व रहने गरी ‘एससिआइजी इन्टरनेशनल नेपाल हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी’ स्थापना गरिएको छ । नेपालमा दर्ता भएको यो कम्पनीमा बिपिसीको २० प्रतिशत र ३ चिनियाँ कम्पनीको ८० प्रतिशत स्वामित्व रहनेछ ।
चिनियाँ कम्पनीमार्फत आगामी ५ वर्षभित्र जलविद्युत विकासमा ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको लगानी भित्र्याउने लक्ष्य छ । कम्पनीले यसअघि १२ मेगावाटको झिमरुक, ४ मेगावाटको खुदी र ९.४ मेगावाटको आँधीखोला निर्माण गरिसकेको छ ।